မန္တလေး | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မန္တလေး ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ
In charge of coordinating an organization's administration system and general workflows. Their duties include supervising staff, facilitating communication throughoutacompany and developing procedures to makeaworkplace more efficient.
In charge of coordinating an organization's administration system and general workflows. Their ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။